किन drywall, "KNAUF" चयन?
सामाग्री निर्माण को सबै भन्दा ठूलो निर्माताहरु मध्ये एक जर्मन कम्पनी "KNAUF" छ। र कम्पनी को मुख्य क्षेत्रहरु मध्ये एक - plasterboard, जिप्सम पानाहरू र प्लेट को उत्पादन। साथै, निर्माता सबै संरचना र आधार सामाग्री को गुण को लागि आदर्श हो जो, EPG र GCR उपचार र खत्म लागि सम्बन्धित उपकरण उत्पादन गर्छ।
कारण उच्च गुणवत्ता उत्पादनहरु कम्पनी को ठूलो दायरामा, "KNAUF" को निर्माण सामाग्री रूसी निर्माण बजार मा विशेष लोकप्रियता प्राप्त गरियो।
को GCR को मुख्य विशेषताहरु
सबै भन्दा लोकप्रिय आज कारण यसको उत्कृष्ट प्रदर्शन, साथै गुणस्तर र मूल्य एक सफल संयोजन गर्न drywall, "KNAUF" छ। यो सामाग्री चाँडै हुन सक्छ र remodeling गर्दा सही, पर्खालहरु align पर्खालहरु निर्माण वा आला बनाउन। तर मुख्य लाभ कुनै पनि जटिलता कन्फिगरेसन संग plasterboard संरचना निर्माण गर्ने क्षमता छ। उच्च ductility तपाईं plasterboard छैन भन्दा भवन निर्माण सामाग्री उपलब्ध कि वस्तुतः कुनै पनि आकार गर्न अनुमति दिन्छ। यो आवश्यक rigidity र संरचनात्मक बल राख्छ।
Plasterboard जहाँ बांधन मिसिन विशेष गोंद छ सजावट, द्वारा निर्मित "KNAUF" मानिसहरूलाई बिल्कुल सुरक्षित छ। वातावरण मैत्री उत्पादन तसर्थ, भौतिक छलफल छ छोराछोरीको कोठा सहित आवासीय क्षेत्रहरु, प्रयोगको लागि उपयुक्त हुन्छ।
साथै, drywall, "KNAUF" उत्कृष्ट ज्वाला प्रतिरोध, reinforcing additives र अचम्मको लचीलापन राम्रो बल धन्यवाद छ। यो दुवै निजी र औद्योगिक निर्माण मा सामाग्री को व्यापक प्रयोग बनाउँछ।
कम्पनी "KNAUF" द्वारा प्रस्तावित Drywall को प्रकार
नियमित उच्च आर्द्रता संग कोठा लागि, एक सामान्य जलवायु संग जीवित कोठा मा स्थापना, र चिस्यान प्रतिरोधी लागि, दुई आधारभूत प्रकार बीच भेद गर्न plasterboard "KNAUF"। साथै, कम्पनी एक water- र आगो प्रतिरोधी गुण, यस्तो स्नान, सना वा बाफ कोठा रूपमा क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जो संग विशेष GCR उत्पादन गर्छ।
पारंपरिक plasterboard को सम्बन्धित प्रकार आवासीय कोठा, साथै सुक्खा तल्ला screed लागि प्रयोग पानाहरू विभाजित। एक मानक खैरो कपडा छ।
प्रयोग उच्च आर्द्रता संग कोठा मा plasterboard पनरोक "KNAUF", मूल्य एक मानक पाना को लागत भन्दा अलिकति उच्च छ। यो एक greenish छाया कपडा द्वारा प्रतिष्ठित गर्न सकिन्छ।
सामान्य पानाहरू GCR, अवस्थामा बहुमत प्रयोग बाहेक, कम्पनी "KNAUF" विशेष गुण छ जो plasterboard, उत्पादन गर्छ।
आगो सुरक्षा को लागि उच्च आवश्यकताहरु (काठ घरहरू, attics, आदि) सँग भवन लागि आगो प्रतिरोधी सामाग्री। यो एक गुलाबी पाना छ। एउटै अर्थ आगो प्रतिरोध को उच्चतम डिग्री छ, र साथै, थप गिलास उन्नत जो "KNAUF Fayerbord" (रातो चिह्नों संग खैरो), लागू हुन्छ।
चिस्यान, आगो-प्रतिरोधी जिप्सम बोर्ड, उल्लिखित दुवै प्रकारका लाभ जोडती। साथै, पानी-विकर्षक सामाग्री रूपमा हरियो पाना तर रातो अभिलेख छ।
मुख्य आयाम र पानाहरू GCR को प्रदर्शन
पानी प्रतिरोधी तस्वीर देखि साधारण drywall, "KNAUF" भेद। एक greenish वर्दी रंग - पहिलो उज्यालो-खैरो रंग, दोस्रो छ। plasterboard पानाहरू प्रकार बिना जो भिन्न मानक आयाम, छ:
चौडाई - 600 (सानो ढाँचा GCR) वा 1200 मिमी (नमूना पाना);
लम्बाइ - 2,000 4,000 मिमी;
मोटाई 6.5 24 मिमी को दायरामा सामाग्री उद्देश्य फरक हुन सक्छ।
सबैभन्दा निर्माण, र यसैले सबैभन्दा सामान्यतः प्रयोग Drywall लागि सुविधाजनक आयाम 12.5 मिमी को एक मोटाई मा 2500h1200 मिमी छ। यस्तो आयामका सामाग्री स्थापना गर्दा प्रयोग गर्न भुइँमा माउन्ट गर्नका लागि पनि पर्याप्त बल, साथै सजिलो छ।
साथै, तिनीहरूले मन र आफ्नो उद्देश्य भिन्न भएकोले पानामा को किनाराको उल्लेख गर्न आवश्यक छ। किनारा सीधा र semicircular thinned हुन सक्छ। पछिल्लो विकल्प स्थापना गर्न सबैभन्दा सुविधाजनक र सबैभन्दा उन्नत प्रौद्योगिकी छ। यस्तो किनारा आपसमा एक पास फिट पानाहरू, तर पनि थप टिकाउ संरचना सञ्चालन मात्र होइन प्रदान गर्दछ।
"KNAUF" द्वारा चिस्यान प्रतिरोधी GCR
विशेष रोचक उत्पादन एक चिस्यान प्रतिरोधी जिप्सम बोर्ड "KNAUF" 12.5 मिमी मोटी, विशेष additives को निर्माण मा प्रयोग द्वारा कम पानी अवशोषण छ जो छ। यो गुण पारंपरिक निर्माण सामाग्री को स्थापना अस्वीकार्य, उदाहरणका लागि, छ भान्सा, बाथरूम वा शौचालय जहाँ ठाउँमा यो सामाग्री प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
जिप्सम बोर्ड को निर्माण मा मात्र विशेष additives हावा बाट चिस्यान अवशोषण सामाग्री रोकन, तर पनि antiseptics को च्याउ र मोल्ड उर्तानु गर्न अनुमति छैन भनेर गर्भवती छ।
Drywall को लागत "KNAUF"
यो "KNAUF" कम्पनी बाट सामाग्री जस्तै "Volme" को रूपमा लायक यसको रूसी साथीहरूको भन्दा बढी छ, कि आरक्षण गर्नुपर्छ। तर, यो समय पूर्ण सामाग्री को उत्कृष्ट गुणवत्ता र स्थायित्व द्वारा अफसेट।
हामी Drywall 12.5 विचार भने, 2500h1200 मिमी सामान्य मानक पाना आकार लागि "KNAUF" को मूल्य बारे 350-450 rubles छ।
पानी प्रतिरोधी सामाग्री को लागत दायरामा 550-630 rubles मा एक सानो उच्च छ।
Plasterboard शुल्क, वृद्धि आगो सुरक्षा आवश्यकताहरु यो 470-530 rubles को मूल्य छ।
भौतिक भइरहेको पानी repellency पनि प्रतिरोधी गुण आगो साथै, यो एक पारंपरिक जिप्सम बोर्ड चिस्यान प्रतिरोधी "KNAUF" 12.5 मिमि भन्दा बढी महंगा छ। मूल्य 600-700 rubles बीच फरक हुन्छ।
सामाग्री को लागत पार्टी र बिक्री क्षेत्र को आकार फरक गर्न सक्नुहुन्छ।
फ्रिज लागि छाप: प्रतिस्थापन वा मरम्मत?
को निलम्बित छत यदि स्वास्थ्य हानिकारक? मिथक र वास्तविकता
टाइलहरू हेरचाह। प्रकार को सतह सफाई लागि अर्थ
खिडकियों को बहाली: उपकरण, भौतिक र प्रविधि
तल्ला कसरी पंक्तिबद्ध? उपयोगी आशय
चित्रकला लागि पतला चाँदी रंग?
रातो पहाड खरानी: हाम्रो स्वास्थ्य लाभ र हानि
भित्री पर्खाल - प्रकार र आवेदन
तालिकाको आधार दोस्रो चरण हो। दोस्रो पाठ्यक्रमहरू पकाउने व्यञ्जनहरू
शुरुआती लागि Kusudama - जापानी संस्कृति चिन्न
अभिनेता 'Harry Potter र आगो को "को Goblet - थपियो गर्ने
Transverse पेट: यसको संरचना र रोगहरु को प्रकार
बच्चाहरु र वयस्क लागि रूसी लोक पहेलियों
Pietrain - नस्ल सुँगुर: कैरेक्टराइजेशन, वर्णन, फोटो
बंगलादेश ... यो कस्तो देश हो? कहाँ स्थित छ?
Batofobiya - गहिराई को डर। गहिराई डर: सम्भव कारण र उपचार विशेषताहरु
Enamelware: फाइदा र बेफाइदा